20 mfm dhibcaha salaada fiiso | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 20 mfm salaadda tukashada fiisaha
20 mfm salaadda tukashada fiisaha
Sabuurradii 118: 10-14:
10 Quruumihii oo dhammu way i wada hareereeyeen, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. 11 Way i hareereeyeen, Way i hareereeyeen, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. Waxay ii hareereeyeen sida shinni oo kale, Waxay u burburiyeen sidii qodxanta dabka oo kale, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. Adigu aad baad igu mudday si aan u dhaco aawadeed, Laakiinse Rabbigaa i caawiyey. Rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga, Oo wuxuu ii noqday badbaadadayda.
Waxaan u adeegnaa Ilaahey quruumaha oo dhan, umana hor istaagi karto nin ama naag uu Ilaahay soo diray. Maanta waxaan uruuriyay 20 mfm salaadda ciise fiiso. Qodobbada salaaddaan waxaa dhiirrigeliyay hagahayga Dr Olukoya ee Mountain dabka iyo wasaaradaha mucjisooyinka. Tukashadani waa salaad xasaasi ah, taas oo ah ka hor intaadan bilaabin inaad ducaysato waa inaan marka hore eegnaa qodobada qaarkood.
Laba Waxyaabood oo lagu baarayo ka hor intaadan u duceyn fiisada.
1). Ilaahay ma ku soo diray? Ma tahay doonista Eebbe inaad ku tagto dalkaas? Ilaahay wuu celin doonaa uun kuwa la soo diray. Haddii uusan ku soo dirin, adigu iskaad u socotaa, lagana yaabo inaadan guuleysan. Sidaa darteed waa inaad u ducaysaa Ilaah marka hore, oo aad hubisaa inay tahay doonista Ilaah inaad ku tagto dalkaas.
2). Maxaad u safraysaa Maxaad ugu baahan tahay inaad ka soo baxdo waddankaaga? Waa inaad haysataa sabab macquul ah iyo ujeedo inaad ka baxdo, waxaa jira asbaabo badan oo khaldan sababta dadku ay u doonayaan inay uga baxaan wadan aan badnayn ay yihiin:
Sababta qaldan 1: Waxay aaminsan yihiin inay hodan ku noqon doonaan dibadda. Kuwani waa sabab aad u qaldan maxaa yeelay maalka ayaa ku jira maskaxda. Bishop Late Arch Bisens Benson Idahosa ayaa laga soo xigtay isagoo leh, "nacasku wuxuu ku jiraa Nigeria ma noqon doono wax u bareera America". Haddii aadan hodan ku noqon karin waddankaaga, fursadaha ayaa ah inaadan meelna ku taajireyn. Dalkaaga waxaa laga yaabaa inuu yahay dal dunida saddexaad ah, laakiin waxaa kale oo ku jira dad badan oo hodan ah. Maalku wuxuu ka bilaabmaa maskaxda. Haddii aad u maleyneyso inaad taajir tahay, waxaad noqon doontaa taajir, haddii aad taajir noqotana, waad taajirnaan doontaa.
Sababta qaldan 2: Maandooriyaha Adag: Tani waa sabab aad u xun inaad u safarto dibada, Ilaah hubaal ma ku taageeri doono haddii tani ay tahay sababtaada.
Waxa kale oo jira sababo fiican oo aad ugu safri karto dalal kale, waxay yihiin inay sii kororsadaan waxbarashadaada, dalxiiska, ballaarinta ganacsiga, ciidaha iyo fasaxa iwm
Si kasta oo aad u jeceshahay inaad u safarto dibedda, wali waa laguu diidi karaa fiiso, taasi waa meesha ay salaaduhu ka soo galaan. Qodobbadan salaadda ee fiisaha ayaa kuu tilmaamaya sidaad u tukatid carqalad kasta oo shaydaan oo jidkaaga ka soo baxa. Sidaad u tukatid qodobbada tukashada maanta, Ilaaha jannada wuxuu ku siin doonaa inaad ka sarraysatid nimco xagga sare ka horreysa fiisooyinka wareysiga fiisadaada ayaa lagu guuleysan doonaa. U soo ducee salaadahan maanta adigoo leh iimaan isla markaana Ilaah ka rajeeya inuu ku qabto shaqo weyn noloshaada magaca Ciise.
1. Aabe, waan kuugu mahadnaqayaa inaad tahay kan kaliya ee i samatabbixin kara.
2. Aabo, caqabada iyo caqabad kasta oo safarkayga saaran ha lagu fogeeyo, magaca Ciise.
3. Aabbe, shabakad kasta oo shaydaan ah oo loogu talagalay guushayda ha loo burburiyo, magaca Ciise Masiix
4. Aabo, aabe nimcada iyo wanaagga ku soo deji nolosheyda, magaca Ciise.
5. Aabe, il kasta oo indho indhaynaya horumarka socodkayga waxay ku heli doonaan fallaadho dab ah, magaca Ciise.
6. Magacayga iyo cinwaankeyga waan ka saarayaa xakamaynta khilaafaadka shar leh, magaca Ciise.
7. Malaa'igta Ilaaha nool ha dhagxaan dhagaxa oo joojiya guushaydii fiisaha, ee magaca Ciise.
8. Ilaahay ha sara kiciyo oo cadaawayaashayda haray oo dhan ha ku kala firdho, magaca Ciise.
9. Dhammaan jinniyo xunxun oo igu canaananaya, ayaa lagu xidhaa magaca Ciise.
10. Sayidow, iiga raalli ahow fadhiga wareysiga fiisada ee magaca Ciise ..
11. Sayidow, waxaad beddeshaa wax beddel rabaani ah haddii ay taasi tahay waxa igu hor socon doona.
12. Waan diidanahay ruuxa dabada waxaanan ku andacoonayaa in ruuxu madaxa ku leeyahay oggolaanshahayga fiisaha ee magaca Ciise
13. Waxaan amrayaa dhammaan jawaabaha xun ee sheydaanku ku beeray maanka qofkasta oo ka soo horjeeda horumarkayga in la burburiyo, magaca Ciise.
14. Sayidow, wareeji, ka saar ama beddel dhammaan wakiillada aadanaha ee go'aansaday inay iga joojiso inaan fiisaha ku helo magaca Ciise.
15. Waxaan helaa saliid loogu talagalay in ka sarreeya kuwa noloshayda, magaca Ciise.
16. Sayidow, i caawi inaan garto oo wax ka qabto wixii daciifnimo ah ee aniga iga horjoogsan kara horumarkayga.
17. Waxaan xidhayaa awood kasta oo loo igmaday si loo hakiyo horumarkayga, magaca Ciise.
18.Waxaan heystaa amar ah inaan ka cararo cadow kasta oo howlahayga ka mid ah, magaca Ciise.
19. Waxaan idin xirayaa oo aan idin siinayaa niyad jaceyl adag oo laxiriira ogolaashaha fiisaha ee magaca Ciise.
20. Waxaan diiday ereyga “maya” iyo jawaab kale oo diidmo ah intii aan ku guda jiray wareysigeyga fiisaha magaca Ciise.
Aabe waad ku mahadsantahay ka jawaabida salaadda.
article Previous10ka Aayadood ee ugu sarreeya ee Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan Imtixaan qaadidda kjv
Next article20 Salaadda Awoodda leh Muujin kara kuwa dhintay
Samuel Francis Oktoobar 17, 2019 12: 41 am
Waad ku mahadsan tahay ducada
Angie Oktoobar 22, 2019 10: 15 am
Ilaahay ha kugu barakeeyo barakada
20 Qodobbada Salaadda oo la socda Aayadaha Baybalka
130 Salaada Miracle ee Guurka
Ducooyinka Waalidiinta Iyo Caruurta
Salaada Habeenki Masjidka Jinniyo Macallin Qaybta 2aad